Ukuqonda iZibhalo zeBuddha
Ukuqonda iiMibhalo zeBuddhist ezahlukeneyo
Ngaba kukho iBhayibhile yesiBuddha? Akunjalo. UbuBuddha bunenani elikhulu leemibhalo, kodwa iimbalwa ezimbalwa zamukelwa njengenene kwaye zigunyazwa zizikolo zonke zobuBuddha.
Kukho esinye esinye isizathu sokuba akukho Bhayuddh Bible. Unqulo oluninzi lubona ukuba izibhalo zazo ziyizwi likaThixo okanye oothixo. NgobuBuddha, ke, kuyaqondwa ukuba izibhalo ziyimfundiso yeBuddha yeembali - owayengeyena uthixo-okanye ezinye iinkosi ezikhanyisiweyo.
Iimfundiso ezibhalwe kwiBuddhist zikhokelo zokusebenza, okanye indlela yokuzibonela ukukhanya. Yintoni ebalulekileyo ukuqonda nokusebenzisa oko itekisi ifundisa, kungekhona nje "ukukholelwa" kubo.
Iintlobo zeZibhalo zeBuddhist
Izibhalo ezininzi zibizwa ngokuthi "sutras" kwisiSanskrit okanye "sutta" e-Pali. Igama elithi sutra okanye i- sutta lithetha "intambo." Igama elithi "sutra" kwisihloko sesicatshulwa sibonisa ukuba umsebenzi unentshumayelo kaBuddha okanye omnye wabafundi bakhe abakhulu. Nangona kunjalo, njengoko ndiza kuchazela kamva, ezininzi i- sutras mhlawumbi zineminye imvelaphi.
I-Sutras iza kubukhulu obukhulu. Eminye ubude beencwadi, ezinye zimbalwa nje. Akukho mntu ubonakala ekulungele ukuqikelela ukuba zingaphi i-sutras kunokubekwa ukuba uhamba nomntu ngamnye kwi-canon kunye nokuqokelela kwi-qubu. Okuninzi.
Azikho zonke izibhalo zi-sutras. Ngaphandle kwe-sutras, kukho iikhompyutheni, imigaqo yamonki kunye neendwendwe, iimfihlakalo malunga nobomi bukaBuddha, kunye nezinye iindidi zeetekisi zibhekisiwe "zizibhalo."
I-Theravada kunye neMahyana Canon
Phantse amabini amabini adlulileyo, ubuBuddha bahlula kwizikolo ezibini ezinkulu , ezibizwa ngokuba yiTheravada neMahayana namhlanje. Izibhalo zeBuddha zidibene nenye okanye enye, zahlula kwiIravada neMahyana.
I-Theravadins ayicingi ukuba iMibhalo ye-Mahayana iyinyaniso. AmaMahayana amaBuddha, ngokubanzi, acinga ukuba i-Theravada canon ibe yinyani, kodwa ngezinye iimeko, amaBuddha aseMahayana bacinga ukuba ezinye zezibhalo zabo zithatha i-Theravada canon igunya.
Okanye, bahamba ngeenguqu ezahlukeneyo kuneenguqulelo iTheravada ihamba.
IZibhalo zeTheravada zeBuddhist
Izibhalo zeSikolo seTheravada ziqokelelwa kumsebenzi obizwa ngokuba yiPali Tipitaka okanye iPan Canon . I-Pali Igama elithi Tipitaka lithetha "iibhasiki ezintathu," ebonisa ukuba iTipitaka ihlulwe ibe ngamacandelo amathathu, kwaye inxalenye nganye iyimqoqo yemisebenzi. Amacandelo amathathu i-basketball ye-sutras (i- Sutta-pitaka ), ibhaskiti yokuqeqesha ( Vinaya-pitaka ), kunye nebhaksi yemfundiso ekhethekileyo ( Abhidhamma-pitaka ).
I-Sutta-pitaka kunye neVinaya-pitaka yile ntshumayelo ebhaliweyo yeBuddha yembali kunye nemithetho ebekwe kuyo imiyalelo ye-monastic. I-Abhidhamma-pitaka ngumsebenzi wokuhlalutya kunye nefilosofi ebizwa ngokuba yiBuddha kodwa mhlawumbi yabhalwa iminyaka emininzi emva kweParirirvana yakhe.
I-Theravadin Pali Tipitika zizonke zolimi lwe-Pali. Kukho iinguqulelo zezi tekisi ezifanayo ezibhalwe kwiSanskrit, kwakhona, nangona ininzi yezinto esinalo kwezi ziinguqulelo zesiTshayina ezilahlekileyo ziSanskrit zangaphambili. Le mibhalo yesiSanskrit / yesiShayina iyingxenye yamaChina kunye neTibetan Canons yaseMahayana Buddhism.
ImiBhalo yamaMahayana Buddhist
Ewe, ukudibanisa ukudideka, kukho iimbini ezimbini ze-Mahayana isicatshulwa, esibizwa ngokuba yi- Canon yaseTibetan kunye neChina yaseChina .
Kukho iindinyana ezininzi ezibonakala kwiintlobo zombini, kwaye ezininzi ezingenayo. I-Canet yaseTibetan iyacaca ihambelana noBuddhism waseTibetan. I-Canon yaseTshayina igunyaziwe kakhulu kwimpuma ye-Asia - i-China, Korea, Japan, Vietnam.
Kukho inguSanskrit / isiShayina inguSutta-pitaka ebizwa ngokuba yiAgamas. Ezi zifumaneka kwiCanon Canon. Kukho nenani elikhulu lamaMahayana sutras abangenabalingani baseTheravada. Kukho iinkolelo kunye namabali adibanisa la mahayana sutras kwiBuddha yeembali, kodwa izazi-mlando zisitsho ukuba imisebenzi yayibhalwe phakathi kwekhulu lokuqala leminyaka BCE kunye nekhulu lesi-5 CE, kunye neyadlulayo. Ngokona nxalenye enkulu, ukuvela kunye nokubhalwa kwezi tekisi akungaziwa.
Imvelaphi engaqondakaliyo yale misebenzi iphakamisa imibuzo malunga negunya labo.
Njengoko ndathi iTheravada Buddhists ayinakuyithobeli iMibhalo ye-Mahayana ngokupheleleyo. Phakathi kwezikolo zaseMahayana Buddhist, abanye baqhubeka bedibanisa iMahayana sutras kunye neBuddha yembali. Abanye bavuma ukuba ezi zibhalo zibhaliwe ngabalobi abangaziwa. Kodwa ngenxa yokuba ubulumko obunzulu kunye nokuxabisa ngokomoya kwezi zibhalo ziye zacaca kwizizukulwana ezininzi, zigcinwa kwaye zihlonishwa njenge-sutras.
I-Mahayana sutras kucatshangelwa ukuba yayibhalwe phantsi kwisiSanskrit, kodwa ininzi yexesha eliguquguqukileyo iinguqulelo zesiTshayina, kwaye i-Sanskrit yasekuqaleni ilahlekile. Kodwa-ke, abanye abaphengululi bathi iinguqulo zokuqala zesiTshayina, ngokwenene, ziinguqulelo zantlandlolo, kwaye ababhali babo bathi baguqulele kwiSanskrit ukuba banike igunya elininzi.
Olu luhlu lweMahayana Sutras alukho olubanzi kodwa luchaza ngokufutshane iinkcukacha ezibalulekileyo zeMahayana sutras.
Ama-Buddhist aseMahayana ngokuqhelekileyo ayamkela inguqu eyahlukileyo ye-Abhidhamma / Abhidharma ebizwa ngokuba nguSarvastivada Abhidharma. Kunokuba i-Pali Vinaya, iBuddhism yaseTibetan ilandela enye inguqu ebizwa ngokuthi i-Mulasarvastivada Vinaya kunye nayo yonke iMahayana ilandela iDharmaguptaka Vinaya. Kwaye kukho iingxelo, amabali kunye nokuphathwa ngaphandle kokubala.
Izikolo ezininzi zaseMahayana zizikhethela zona iziphi ezi ndawo zibaluleke kakhulu, kwaye ezininzi izikolo zigxininisa kuphela iincinci ezincinci ze-sutras kunye neengcaciso. Kodwa akusoloko isisigxina esifanayo .
Ngoko hayi, akukho "iBhayibhile yeBuddha."
Uvavanyo lweNkululeko yamaBhudo kunye nobuBuddha
Top 20 Best Shakira Songs
Ukuqonda iNgesi yesiNgesi
Rhodes College Admissions Facts
I-Oakland Hills Country Club